आईपिएल :बैंगलोरलाई झट्का ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी नै खेल्न नसक्ने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईपिएल :बैंगलोरलाई झट्का ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी नै खेल्न नसक्ने
मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:०८ मा प्रकाशित !
एजेन्सी। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीको टिम रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई ठूलो समस्या परेको छ । आज आफ्नै होमग्राउण्डमा मुम्बइविरुद्ध उत्रने बैंगलोरका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडीले खेल्न नसक्ने अवस्था छ । उसका सबैभन्दा बढी फर्ममा रहेका विष्फोटक ब्याट्सम्यान एबी डिभिलियर्स खेल्न नसक्ने स्थिति छ ।
डिभिलियर्स बिरामी भएकै कारण यसअघि कोलकाता नाइटराइडर्सविरुद्धको खेलमा पनि खेल्न सकेका थिएनन् । डिभिलियर्स नखेलेको त्यो खेल बैंगलोरले हारेको थियो । डिभिलियर्स ज्वरोका कारण आराम गरिरहेका छन् । आश्चर्यजनक रुपमा अन्तिम समयमा ठिक भएमा मात्र डिभिलियर्स आजको खेल खेल्नेछन् अन्यथा उनको खेल्ने सम्भावना छैन ।
यी दुवै टिमलाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ किनकि अंक तालिकामा बैंगलोर छैटौं र मुम्बइ सातौं स्थानमा छन् । यसअघिको खेलमा डिभिलियर्स हुँदा र नहुँदाको फरक टिमले भोगिसकेको छ । बैंगलोरले जितेका सबैजसो खेलमा डिभिलियर्सको मुख्य भूमिका थियो । डिभिलियर्सको अनुपस्थितिमा कप्तान कोहलीमाथि दबाब बढेको छ र यो दबाब उनले थेग्न सकिरहेका छैनन् ।
PREVIOUS POST Previous post: तेश्रो त्रैमासिकमै वाणिज्य बैंकको मुनाफा तीन अर्ब आठ करोड
NEXT POST Next post: तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु जसले तपाइको अनुहारनै परिवर्तन गरिदिन्छ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, बैशाख १८, २०७५ १५:०८